Raha toa ka miasa an-tserasera izay toeram-pivarotana orinasa be dia be ny vaovao saro-pady ara-bola sy ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa sy ny mpampiasa ny, dia tokony ho azo antoka amin'ny fiarovana mpijirika izay mangalatra vaovao. Azonao mety hahatonga ny vaovao ara-bola ny mpampiasa sy ny hampandefitra ny fiarovana ara-bola raha mpijirika aterineto ao an-toerana Hack hangalatra saro-pady angona - ary mety hametraka ianao sy ny raharaha amin'ny loza lehibe. Fa amin'ny fiantohana madio an-tserasera ny politika eo amin'ny toerana rakotra, tsara ianao voaro aterineto loza izay mety hampandefitra anao na ny mpanjifa.
Moa ve ianao mahafantatra fa Yahoo sy LinkedIn ankoatra ny hafa ireo nijirika ho ela akory izay, nanaiky lembenana ny antsipirian'ny manokana an-tapitrisany sy ny raharaham-barotra mailaka Yahoo mpampiasa? Ihany koa ny ezaka natao mba hangalatra sy ny carte de crédit raharaham-barotra tsy miankina amin'ny toerana vaovao eo anoloan'ny, ary tsy te-hametraka ny tenanao ho toy izany ny loza mety hitranga raha tsy mametraka harato eo amin'ny toerana fiarovana. Aza ve mihevitra fa ny andraikitry ny fampiantranoana orinasa mba hiarovana ny angona avy amin'ny mpijirika, satria raha ny marina dia mety tsy ho azo ianteherana rehetra. Noho izany dia tokony tsy hametraka ny fiarovana ny vohikala ho eo an-tànan'ny fampiantranoana ny aterineto orinasa, na dia azo atao koa ny miezaka bests rehetra mba hiarovana ny angon-drakitra ny tranonkala eo amin'ny sehatra.
Misy orinasa fiantohana manokana misahana ny fiantohana madio an-tserasera, ary afaka miantsena amin'ny aterineto ihany koa mba hividy fandrakofana an-tserasera noho ny raharaham-barotra. Anaty aterineto ireo orinasa fiantohana madio no hanombana ny haavon'ny ny mety aterineto ianao fanafihana miatrika sy proffer Firewall fiarovana mba hiaro ny tahirin-kevitra sy ny fiarovana vaovao, ary avy eo dia manaova ny fiantohana ny fandrakofana ny politika mba hiarovana ny mpandraharaha an-tserasera. Ny insurer ho afaka ampy onitra anao sy hiaro anao amin'ny ady lafo vidy, very ny raharaham-barotra, ary ny simba amin'ny aterineto laza.
Rehefa mandinika ny teknolojia avo-potentials ny mpijirika sy ny loza izy ireo hampidi mpandraharaha amin'ny aterineto sy ny mpanjifa, fa tianao ny hiaro mpanjifa tahirin-kevitra sy tsy miankina amin'ny fahazoana an-tserasera antsipirihany madio fiantohana ankehitriny. Raha orinasa lehibe azo lasibatra amin'ny fanafihana aterineto mitohy, dia tsy miavaka; ary raha ny raharaham-barotra an-tserasera mendrika na inona na inona, dia mety ho lasibatra voalohany ho an'ny aterineto mpijirika. An-tserasera fiantohana madio mety ho ny back-ny drafitra fiarovana ilainao, ary mety ho ny maha samy hafa rehetra amin'ny aterineto fahombiazana sy ny fahaverezan'ny fandraharahana miaraka ady. Mandehana ho iray amin'izao fotoana izao, ary Te ho faly ianao.
Travel Insurance: Nahoana Ianao Manana, talohan'ny nitondrany iray Off